Natinook, iSango eliya kwiNtaba yeArapiles - I-Airbnb
Natinook, iSango eliya kwiNtaba yeArapiles
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguElaine
Wamkelekile eNatimuk naseNatinook!
Sinethemba lokuba senze i-oasis encinci apho ungaphumla kwaye wonwabele ixesha lakho kwindawo yethu nokuba yindawo yokulala okanye ukuhlala ixesha elide ukonwabela konke okunikezwayo kule ndawo.
Iyunithi yethu izolile kwaye ikhululekile kwaye inazo zonke izinto onokuzifuna.
Ikwisitrato esithe cwaka, kwaye inesitiya esikhulu.
Mhlawumbi uya kuba notyelelo oluvela ku-Jasper u-kelpie wethu 'ofuna ukuba yinja yeegusha' kwaye uxakeke ngokupheleleyo ziichoki zethu ezimbini.
Ifama yethu ingaphaya kocingo.
INatinook yindawo ezimele ngokupheleleyo, ilula kwaye inomoya inekhitshi yesicwangciso esivulekileyo, indawo yokutyela, igumbi lokuhlala, igumbi lokulala elahlukileyo elinebhedi enkulukazi kunye negumbi lokuhlambela elihle.
Inendawo yokupheka yegesi etshisa ezi-4, i-oveni encinci kunye nomatshini wokuhlamba izitya kunye nayo yonke into oyifunayo ukuze uzilungiselele. Iziqholo zokutya ezisisiseko njl.njl.
Inkqubo yokwahlula-hlula ukugcina ukhululekile okanye kutheni ungalayishi isifudumezi somthi se-potbelly esizimeleyo ukuze uhlale upholile kubusuku obubandayo!
Ibhedi yePorta iyafumaneka xa iceliwe.
Kumalunga nemizuzu emi-2 ukuhamba ukusuka eNatimuk Main Street, 10km ukuya kwindawo edumileyo yokukhwela amatye eMount Arapiles kunye nemizuzu engama-20 ukuya kwidolophu enkulu yaseHorsham.
4.96 · Izimvo eziyi-112
I-Natimuk yidolophu encinci enabemi be-500 kunye nomxube onomdla wabantu abavela kuluntu lwasefama, uluntu olunyukayo kunye namagcisa kwaye ngokuqinisekileyo kuphela i-10km ye-Mount Arapiles-Tooan State Park enikezela ngokunyuka kwamatye okusemgangathweni, iingoma zokuhamba kunye neendlela zebhayisikili. .
I-Nati Pub ikumgama oyi-400m kuphela kwisitrato esikhulu kwaye yenza ukutya okumnandi kwi-pub kunye neendawo zokuhlambela kunye nee-efpos.
I-Milkbar ivulwa yonke imihla kwaye yenza iintlanzi kunye neetshiphusi kunye nokutya okusisiseko.
I-Verj embindini wedolophu ineoveni yepizza yasekuhlaleni, i-skatepark kunye nebala lokudlala labantwana.
I-Natimuk ineofisi yeposi kunye neendaba.
IHorsham ikumgama nje wemizuzu engama-20 enayo yonke into onokuyidinga ukuze uhlale ixesha elide.
Akukho ndawo yamafutha eNatimuk!
Mna noMark sihlala kwindlu enkulu ngaphaya kwendlela yokungena, ngoko ke ziyafumaneka ukuba kukho nantoni na engasebenziyo okanye kukho nantoni na onokuyidinga ukuze uhlale ukhululekile kwaye wonwabe.